त्रिभुवन बिश्वबिद्यालय चिकित्सा बिज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान (टिचिङ अस्पताल) का बरिष्ठ हार्डजोर्नी बिशेषज्ञ प्रा डा. गोबिन्द केसी आमरण अनसनमा बसेको आज १४ दिन भई सक्यो । अनसनको ११ दिनदेखी मात्रै सरकारको आखाँ पुगेको डा केसीको अनसनले हिजो देखी औपचारिक रुपमा संसदमा प्रवेश पाएको छ । हिजो मात्र काँग्रेस सांसद गगन थापाले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रुपमा डा केसीले उठाएका मागका बारेमा छलफल गरियोस भनेर संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन ।
आठौं पटक आमरण अनसनमा बसेका केसीका मागमा कुनै ब्यक्तिगत स्वार्थका कुरा देखीदैनन फेरी पनि उनी किन यसरी पटक पटक आफ्नो जीवन नै खतरामा पारेर आमरण अनशन बसिरहन्छ भन्ने बारेमा गहिरिएर अध्ययन हुन जरुरी छ । केसीको पहिलो देखी सातौं अनसन सम्म आईपुग्दा तत्कालिन सरकारले फगत केसीको अनसन तो अनसन तोडाउनका लागी मात्रै आश्वासन दिएको देखीन्छ । नेपालमा भईरहेको स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा भईरहेको चरम माफिया तन्त्रको समाप्ति नै डा केसीको मुलभुत माग देखीन्छ । एउटा अभिवाहित ब्यक्ति जसले आफ्ना लागी कहिल्यै केही सोचेन । यदि सोच्यो भने केवल नेपाल र सारा नेपालीका लागी मात्र सोच्यो । चाहे त्यो सिन्धापाल्चोक दुर दराजका गाउँमा औषधी बाँड्ने काम होस या जाजरकोटमा झाडा पखालाले थलिएका बिरामीको उपचार गर्दा नै किन नहोस डा गोबिन्द केसीले जहिल्यै सारा नेपालीको स्वास्थ्यका लागी मात्र लडिरहेका छन । पछिल्लो समय गत असार २६ गते देखी डा गोबिन्द केसी आठौं पटक आमरण अनसनमा बसेका छन । अहिले उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको चिकित्सकहरुले बताउन थालेका छन ।
डा केसी यति बेला एक्लै सत्यको लडाई लडिरहेका छन अनि हामी आफुलाई यो देशको नागरिक भनाउँदाहरु उनी कहिले मर्छन भनेर टुलुटुलु हेरिरहेका छौं । नेपालका गरीब नागरिकले समयमा एउटा क्यापसुल खान नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको यथार्थलाई बदलेर स्वास्थ सेवा सबैको पहँुचमा त्यो पनि सर्व सुलभ रुपमा हुनु पर्छ भन्दै एउटा क्रान्तिकारी योद्धा आफ्नो जीवन दाउमा लगाईरहेका छन । एक छिन सोचौं डा केसीले उठाएका माग पुरा हुँदा उनको के स्वार्थ पुरा हुन्छ र । यदि उनको माग हामी सबै नेपालीका लागी हो भने हामी किन उनको साथमा खुलेर बाहिर आउन सकिरहेका छैनौं । यदि हामी नखुल्नुमा राजनितिक आस्था हो भने भत्काईदिऔं त्यस्तो आस्था जसले मलाई मेरो छोरा छोरीले कम खर्चमा नै चिकित्सा बिज्ञानको अध्ययन गर्न सकुन, म बिरामी हुँदा सहज रुपमा उपचार गर्न सकियोस भने आफु मर्न तयार भएको डा केसी जस्तो एउटा निष्ठावान ब्यक्तिको समर्थन गर्न सक्दैनौं । जीवन नै नरहे के को आस्था, कस्तो आस्था त्यसैले डा केसी मरे पछि सरकारलाई गाली गर्न सडकमा उत्रनु भन्दा उनको जीवन रक्षा मात्र होईन चिकित्सा क्षेत्रको बिकृति बिरुद्ध पनि आवाज बुलन्द बनाउनु पर्ने बेला आएको छ ।
भनिन्छ खराब मान्छेले काम बिगार्नु भन्दा असल मान्छेहरुले केही काम नगर्नु ठुलो अपराध हो । आज यो समाजका असल भनाउँदा मान्छेहरुलाई मेरो प्रश्न छ केले छेक्यो तपाईलाई डा केसीको समर्थनमा देश भरका सडक भर्नलाई ? डा केसीको लाश माथी रुनु भन्दा उनले उठाएका जायज मागका बारेमा सरकारलाई दबाब दिएर उनको जीवन रक्षा गर्नु बुद्धिमता हुनेछ । केही झुण्ड जो चिकित्सा क्षेत्रको बिकृत्तिमा पौडि खेलेर आफु मात्र होईन आफ्ना सन्तानका लागी पनि सम्पत्ति थुपार्न पल्कीएका छन तीनका लागी मात्र डा केसी गलपासो भएका छन । अनि तीनको प्रभाव हरेक पटक सरकारले थाम्न नसकेर डा केसीका मागमा बेवास्था गर्दै आईरहेको छ । लोकतन्त्रमा सर्बोपरी आम नागरिक हुन्छ भन्ने कुरा वास्तविकतामा उतार्न पनि आम नागरिकका लागी एक्लै लडदै आईरहेका डा केसीको समर्थनमा मेची देखी माहकाली सम्मका नेपालीले एउटै आवाज बनाउनै पर्छ नत्र आज जे कुराले तपाईलाई छेकीरहेको छ भोली तपाई र तपाईको परिवार अस्पतालमा उपचार गराउँन जाँदा होस या चिकित्सा बिज्ञानको अध्ययन गर्न जाँदा त्यही कुराले तपाईलाई अस्पताल कै बेडमा मार्ने छ अनि अब्बल नतिजा ल्याएर पनि भने जति पैसा तिर्न नसकेर डाक्टर बन्ने सपना बर्षातको भेलमा बगाएर बस्नु पर्नेछ । डा केसी मरे भने एउटा त्यस्तो आवाज सदाका लागी अस्ताउने छ जसले मेडिकल माफियाहरुका अगाडी आपुलाई कहिले झुकाएनन । डा केसी मरे भने गरीब नेपाली हार्नेछ अनि मेडिकल माफियाहरु जीतको उत्सव मनाउँनेछन । डा केसी मरे भने गरीब नेपाली अभिभावकका सन्तानले डाक्टर बन्ने सपना बिर्सिनु पर्नेछ भने गरीबका लागी उपचार मेडिकल माफियाका हातमा हुनेछ । डा केसी मेरा लागी मर्दैछन, उनी आम गरीब नेपालीका लागी मर्दैछन । त्यसैले हामीले डा केसीको मृत्युलाई अंगालेर मेडिकल माफियाहरुलाई जीतको उत्सब मनाउन दिनु हुदैंन । समय अझै घर्केको छैन आजै देखी उठौं जुटौं डा गोबिन्द केसीको जीवन रक्षाका लागी सरकरलाई दबाब सृजना गरौं । यसमा तपाईको मत